Iyo firimu inotanga kuratidzwa munaGunyana anotevera | Bezzia
Firimu rinotanga kuratidzwa munaGunyana
Maria vazquez | 26/08/2021 12:00 | tsika nemagariro
Gunyana mwedzi watinoshamwaridzana nawo kudzokera kumagariro. Kudzoka kunosanganisira kutangazve maitiro atakaisa parutivi munguva yezhizha. Chinhu icho, chekutanga, zvingaratidzika sezvisingakwezvi kwatiri asi zvinotibvumidzawo kuti titore mafaro madiki senge, semuenzaniso, mafirimu masikati.
Kunyangwe kuenda kumamuvhi muzhizha kunogona kuve kunonakidza kurwisa kupisa nekufema kwemhepo kutonhodza, chokwadi ndechekuti vazhinji vedu tinosiya ichi chiitiko mukati memwedzi miviri yezhizha. Kana seni, zvakadaro, urikugadzirira kutangazve chiitiko ichi munaGunyana, uchave nezvakawanda mafirimu ekutanga kubva pakusarudza. Izvi ndizvo zvimwe, cherekedza!
2 Vanaamai vakafanana
3 Iyo Protégé
4 Bhuruu bayou
7 Mhuri yaBloom
Inotungamirwa na Carol Rodríguez Colás
Mutambi: Vicky Luengo, Elisabet Casanovas, Carolina Yuste, Àngela Cervantes
Marta, Desi, Soraya neBea, shamwari dzisingapatsanurike mukuyaruka, sangana zvakare munharaunda kuti udzore hukama hwechokwadi uye hunosuruvarisa. Ichokwadi chinovamanikidza kutarisana nevaya vachiri kuyaruka vaive uye vakadzi vavanoda kuve. Vanenge vasingazvizive, ivo vanozobatsirana kuita sarudzo dzakakosha muhupenyu hwavo. Kufamba kwenguva uye nekusiyana kwavakaita hazvizove chikonzero chekushamwaridzana kwavo kukunda zvimwe zvese.
Inotungamirwa na Pedro Almodovar
Kanda: Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijon
Ana mukadzi wechidiki ari kuzova nemwana wake wekutanga uye anotya chose. Janis mukadzi akura anozove amai panguva imwechete naAna.Nyaya inotevera vakadzi vaviri ava mumatanho akasiyana ehupenyu, zvisinei, kuberekwa kwevana vavo zuva rimwe chete uye muchipatara chimwe chete zvichagadzira mavari chisungo chinonetsa kudambura.
Inotungamirwa na Martin musasa
Mutambi: Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Maggie Q
Firimu rinotaura nyaya yaAna naRembrandt, maviri eiyo mhondi dzepamusoro dzenyika Ivo vanogovana zvakapfuura zvine mumvuri muVietnam. Kwemakore, vakatenderera nyika vachikwikwidza zvibvumirano zvepamusoro. Asi zvese zvinoshanduka kana chipangamazano chaAna, Moody, achiurayiwa uye vaviri ava vanofanirwa kushanda pamwechete.
Inotungamirwa na Justin chon
Mutambi: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien
Blue Bayou inotaurira nyaya ye Mhuri yeAmerica inorwira ramangwana ravo. Antonio LeBlanc, akaberekerwa muKorea, akagamuchirwa uye akapedza hujaya hwake mutaundi diki mumatope eLouisiana. Akaroora kune rudo rwehupenyu hwake: Kathy, uyo aive nemwanasikana kubva kuhukama hwekare - Jessie - uyo anodiwa naAntonio sekunge aive wake. Paanenge achiedza kupa mhuri yake hupenyu hwakagwinya, anofanirwa kurwisa zvipoko kubva munguva yake yakapfuura paanonzwa kuti nyika yaakakurira inogona kumudzinga.
Inotungamirwa na Icíar Bollaín
Mutambi: Blanca Portillo, Luis Tosar, María Cerezuela
Mugore 2000 ETA inouraya Juan María Jaúregui. Makore gumi nerimwe gare gare, chirikadzi yake Maixabel Lasa, anogamuchira chikumbiro chinoshamisa kutaura zvishoma: mumwe wemhondi akumbira kutaura naye mutirongo reNanclares de la Oca muAlava, kwaanogara mutirongo mushure mekusiya gandanga remagandanga uye kurwa kwezvombo.
Inotungamirwa na Liesl tommy
Mutambi: Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, Forest Whitaker
Un rwendo kuburikidza nehupenyu hwaAretha Franklin, kubva pakuve mudiki prodigy muDetroit uye kuimba vhangeri mukwaya yechechi, kusvika pakuve nyanzvi yepasi rese. Nhau yekukwira yakatambudzwa nekurwa uye kukunda, nehupenyu hwega hwekushushikana huzere nematambudziko.
Inotungamirwa na Glendyn Ivin
Mutambi: Naomi Watts, Andrew Lincoln, Jacki Weaver
Penguin Bloom, wekupedzisira wemafirimu ekutanga atinokupa nhasi, inoisa nyaya yayo kuna Cameron Bloom, mukadzi wake Sam nevana vavo vatatu. Hupenyu hwake hunochinja kana a Nhengo nyowani mumhuri: mwana magpie akasiiwa mushure mekudonha kubva mudendere rayo uye yavanobhabhatidza sePenguin Bloom.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » tsika nemagariro » Firimu rinotanga kuratidzwa munaGunyana
Gadziridza madziro uye pasi peimba yako pasina kuita chero mabasa
Kuchena, kurongedza pfungwa nekuraira imba